Muuqaalka qarsoodiga ah ee Brocken, ifafaalaha indhaha xiisaha leh | Saadaasha Shabakadda
Qorraxdu markay dhacayso, xagasha ay iftiinka mashaariicdu ka xigto dusha sare waxay u janjeedhaa 180º, si loo kala bixiyo. Haddii aan aragno hooskeenna, waxaan arki karnaa sida ay u sii dheeraato iyo ka sii dheeraato, iyo haddii dusha sare uu siman yahay oo aynaan haysan caqabado ka horjoogsanaya sawirkeenna, hoosku wuu sii dheeraan karaa masaafo dheer Muuqaalka 'Brocken spectrum' wuxuu ku saleysan yahay mabda'aas iyo inuu jiro ceeryaamo, loogu magac daray Mount Brocken 1142 mitir oo ka sarreeya heerka badda buuraha Harz, Jarmalka.
Dadka buurta fuula ee meesha yimid waxay arki karaan qorrax dhaca, iyagoo uga tagaya Qorraxda gadaashooda, muuqaalkeeda dhaadheer ee dheer ayaa lagu saadaaliyay ceeryaanta, taas oo si caadi ah loo sameeyo. Mararka qaarkood, adoo fiirinaya masaafada, falaaraha qorraxda waxay sameysmayaan aura midabada qaansoroobaad. Halo taasi waa daawadaha 'Brocken'.
Waa maxay sababta xiisaha leh?
Sababtoo ah muuqaalka 'Brocken spectrum' ayaa kaliya noqon kara kan hooska dhiga. Dhib malahan haddii dad kale ay ku raacaan, halo waxaa arki kara oo keliya qofka hooskiisa la saadaalinayo. Marka, haddii qof walbaa diyaar u yahay inuu arko hooskiisa, waxaad arki doontaa oo keliya aurahooda midabka leh iyo hooska kale ee saxaabada ee lagu saadaaliyay ceeryaanta iyadoo aan wax kale jirin. Mid kale oo ka mid ah ifafaalaha la socda ayaa ah inay umuuqato inay runti daboolayso jidhka. Maaddaama hoosku ka muuqdo ceeryaamo, silhouette-ka aadanaha uma muuqdo mid jiifa, laakiin wuxuu u muuqdaa qaab madmadow oo taagan.
Muuqaalka, xitaa asal ahaanna ka soo jeeda Brocken, ayaa laga arki karaa meelo kale. Waqtiyadii hore, ifafaalahaani wuxuu ka badnaa oo kaliya saameynta indhaha. Jiritaanka halos ama areolas ee ku wareegsan jirka ama madaxa, waxay u ekayd nooc ka mid ah calaamadaha rabbaaniga ah, in Eebbe u doortay qofkaas ujeeddo gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Muuqaalka qarsoodiga ah ee 'Brocken spectrum', oo ah ifafaale indhaha la yaab leh
Cristina Chantres Men de Hanz dijo
Hadda waxaan qorayaa nusuustaydii ugu horreysay maqaalkanina aad buu ii anfacay.
Waxaan xiiseynayaa dhacdooyinka qaarkood ee cimilada ee lagu soo dari doono qorshaha.
Sidoo kale waxaan ahay qof jecel dabeecadda oo aan jeclahay qorista (balooggeyga http://www.renaciendoenelkm50.com)
Jawaab ku sii Cristina Chantres Men de Hanz
Qiiqa CO2 ee kordhay wuxuu wiiqi doonaa monsoon Waqooyiga Ameerika